Home / Interior design / 2020 Famolavolana efitrano fandraisam-bahiny vaovao | Fomba 80
2020 / 12 / 05 FisokajianaInterior design 6435 0
Rehefa manatsara hatrany ny kalitaon'ny fiainana, miova haingana ny lamaody famolavolana, ary indray mipy maso, ny fomba zaridaina mediteraneanina, ary na ny fomba Skandinavianina aza, dia nanjavona avokoa. Na izany aza, ny fomba dia mbola tsy lambam-baravarana, minimalista, kivy, natiora no malaza, fa ny sinoa vaovao, ny fahatsorana maoderina dia mbola malaza be, amin'ny maha-mpitondra entana sy fomba fanao azy, ny efitrano fandraisam-bahiny no tena fototr'ilay efitrano.
Ny tonian-dahatsoratry ny firafitry ny atitany ankehitriny dia nanangona ny sasany amin'ireo efitrano fandraisam-bahiny vaovao indrindra amin'ity taona ity. Manantena izahay fa hitondra aingam-panahy ho anao izany. (Ny faran'ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny fomba fampidinana ireo sary avo lenta)
Pristine, Milamina ary Tsara tarehy
Wabi (wabi-sabi) dia hatsarana japoney mifototra amin'ny fanekena ny fandeferana sy ny tsy fahalavorariana. Izy io dia hevitra iray nalaina avy amin'ireo marika telo amin'ny Buddhism, indrindra ny tsy fahatanterahana. Ny sasany mihevitra ny wabi-sabi ho ny avo indrindra amin'ny hatsarana atsinanana.
Amin'ny teny laika, midika izany fa mety ho maloka izy io, saingy io no ambaratonga avo indrindra amin'ny estetika. Tsindrio eto raha hamaky: Inona ny hatsaran'ny famoizam-po?
Madio, Matoky tena, mahery vaika
Ilay minimalista Tao Te Ching dia nilaza hoe: “Amin'ny fiandohan'ny zava-drehetra, ny làlana lehibe no tsotra indrindra, ary io no be pitsiny indrindra. Ilay antsoina hoe "minimalist" no farany amin'ny fahatsorana, ny hatsarana faratampony, ny fotsy fotsy faratampony, saingy misy tsiro manankarena.
Minimalism tsy mitaky anao hanana na inona na inona, fa hiampita ny ranomasimbe fitaovana hitadiavana izay tena zava-dehibe. Tsindrio raha hamaky: ireo teknika famolavolana minimalista fito izay kely indrindra!
Fomban-drazana kolontsaina nentim-paharazana
Fomba sinoa vaovao (fomban'ny sinoa vaovao) mandova ny foto-kevitry ny filozofia momba ny famolavolana trano an'ny Dinasti Ming sy Qing, izay miorina amin'ny fomban-drazana sy ny fahitana maoderina maoderina, ary manadio sy mampitombo ny singa mahazatra ao amin'ny kolontsaina manome trano nentim-paharazana ho lasa manintona vaovao.
Sinoa Vaovao, nanjary lamaody fiainana lamaody ny fiverenany avy amin'ny fiverenan'ny fahatokisan'ny kolontsaina sinoa azy koa dia vokatry ny rotsakorana ara-tantara an'arivony taona maro. Tsindrio raha te hamaky: Volavola sy fomba fiteny fanaka malefaka sinoa vaovao.
Mahafatifaty lamaody be pitsiny
Is Fahazavana sy haingo tsy mafana intsony? Ny valiny aloha: Tsia. Rehefa manakaiky ny taona 2020 dia toa manjary lafo be ny tsena. Ny fialan-tsasatra mifanaraka amin'ny estetika ankehitriny sy mahafaly ny filan'ny mpanjifa dia tsy tokony hiala amin'ny fotoana fohy.
Ny taona 2020 dia taona fampidirana fomba sy fanovana ny labozia. Ny famolavolana haitraitra dia mihalefy tsikelikely ary miresaka bebe kokoa momba ny fototry ny fomba mihaja. Vokatr'izany dia nanjavona tsy hita teny an-tsena ny sasany amin'ireo famolavolana marika mihoa-pampana. Tsindrio eto raha hamaky: ny fanadihadiana matihanina sy feno indrindra momba ny fanararaotana maivana!
Previous :: Fomba fanaovana hazo, Ahoana ny fomba hamoronana hatsarana gadona? Next: LA PICADA | Hummingbird Design Asa vaovao
2020 / 12 / 12 6076
2020 / 11 / 29 6182
2020 / 11 / 29 7555
2020 / 11 / 29 6517
2020 / 11 / 29 6742
2020 / 11 / 17 6473